सिइओ, फिलिप्स लाइटिङ
फिलिप्स लाइटिङले भारतमा दोहोरो अंकको वृद्धि खोजिरहेको छ । कम्पनीका उत्पादन लोकप्रिय हुँदै बजारसमेत विस्तार भइरहेको छ । विश्वव्यापी कम्पनी फिलिप्स लाइटिङका लागि भारत विश्वकै शीर्ष पाँच ठूलो बजारमा परेको छ । कम्पनीले केही वर्षभित्रै भारतलाई तेस्रो ठूलो बजारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेका कम्पनीका विश्वव्यापी सिइओ इरिक रोनडोलाटले बताएका छन् । नेपाल पनि भारतकै बजारको विस्तारित बजार भएको परिप्रेक्ष्यमा विगतका केही वर्ष विश्व व्यवसाय गर्नका लागि कठिन थलो बन्दै गएको धारणा उनको छ । यो मामिलामा भारत पनि अछुतो छैन । भारतीय सरकारका विभिन्न किसिमका नीतिका कारण भारत कठिन थलो बनेको उनको धारणा छ । भारतमा केही समस्या देखिए पनि जीएसटीजस्तो सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएको छ । जीएसटीले भारतमा फिलिप्सको बिक्रीमा असर पारेको छ, तर यसले विशाल फाइदा पनि दिएको छ । इकोनोमिक टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा इरिक रोनडोलाटले कम्पनीले हालसालै मात्र नाम परिवर्तन गरेर सिग्निफाइ राखेको तर ब्रान्ड भने फिलिप्स नै रहेको बताउँदै कम्पनीको विश्वव्यापी गतिविधिका केही अंशमा भारतलाई आधार मानेको बताएका छन् । भारतीय उपभोक्ताहरूले कम्पनीका प्रविधिहरू वाइफाइमा रुचि देखाएको उनले बताए । यो प्रविधिले प्रकाशको प्रयोग गरेर डाटा प्रसार गर्छ र यसको गति वाइफाइको भन्दा तीव्र दरको र सुरक्षित हुने उनले बताए । रोनडोलाटसँग पत्रिकाले गरेको कुराकानीको सारको अनुवाद :
भारतमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?
अनुपम । हामी विश्वव्यापी ब्रान्ड हौं तर उपभोक्ताले हामीलाई भारतीय ब्रान्ड नै भनेर सोचेका छन् । हामीसँग अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) को दुई केन्द्र रहेका छन् । पहिलो भारतका लागि, जुन बिल्कुल स्थानीय हो र अर्को केन्द्र विश्वका लागि हो । भारतीय घरधुरीमा लाइटिङका लागि उत्पादन हुने तीन उत्पादनमा एक फिलिप ब्रान्डको रहेको छ । हामी स्थानीयको रुचीलाई आफ्नोमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
तपार्इंका लगानी योजनाहरू के–के छन् ?
यहाँको बजारमा हाम्रो नेतृत्वदायी स्थान भएको मलाई लागेको छ । लाइटिङ सामग्री बिक्रीका मामिलामा हामीले दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गरेका छौं । हामीले लगानीको विषयलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । त्यसैले हामी भारतको बजारप्रति अत्यन्त खुसी पनि छौं । यो नयाँ प्लान्ट खोल्ने बारेमा छैन । हामीसँग स्थापित औद्योगिक नेटवर्क छ । हामी ४८ भन्दा बढी कम्पनीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं ।
प्रकाश पथ कार्यक्रम लन्च भएपछि हामी अत्यन्त प्रगतिशील भएका छौं । यसप्रति हामी सकारात्मक पनि छौं । यो कार्यक्रम ठूलो परिमाणका बारेमा थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत घरधुरीका लागि ८० करोड बल्ब बिक्री गर्ने र ३ करोड ५० लाख सडक बत्तीलाई बिक्री गर्ने रहेको थियो । यो पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । हामीले यो काम ग¥यौं । यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीभन्दा पनि स्थानीय बनायो । हाल हामीले भारतमा जुन परिमाणमा एलईडी बत्तीको आपूर्ति गर्छौ, त्यसको ९८ प्रतिशत भारतमै उत्पादन भएका छन् । विदेशमा उत्पादन गरेर ल्याएको होइन । विदेशमा उत्पादित बत्तीको त २ प्रतिशतको हिस्सा मात्रै छ । हामीले आर एन्ड डीमा गरिने लगानीलाई पनि निरन्तरता दिनेछौं । हामी हाम्रो स्थापित उद्योगको लगानीमा निरन्तरता दिनेछौं ।
हामी लगानी गर्ने छौं र हामीले लगानीलाई पनि निरन्तरता दिनेछौं । किनभने हामी यो बजारमाथि विश्वास गर्छाैं । यो बाहेक हामीले विश्वको नेटवर्किङ अपरेटिङ सेन्टरमा लगानी गरिरहेका छौं । जुन बैंग्लोरमा स्थापना गरिएको छ । पहिले फिलिप्सको नामले चिनिएको र हाल नाम फेरिएको सिग्निफाइका लागि भारतीय बजार उत्कृष्ट पाँचौंमा परेको छ । पहिलो बजारका रूपमा अमेरिका, दोस्रोमा चीन रहेको अवस्थामा भारत पनि त्यति पर छैन । अमेरिका र चीनपछि तेस्रो र चौथो ठूलो बजार छोडेर भारत पाँचौं ठूलो बजारका रूपमा रहेको छ ।
के भारतमा व्यवसाय गर्न सहज छ ?
विगतका केही वर्षहरूमा प्रशस्त मात्रामा सकारात्मक अवस्था देखेको छु । यद्यपि केही समस्याहरू भने यथावतै छन् । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा हामीलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक भूमिका खेल्नु छैन । तर, विगतका केही वर्षहरूमा मैले यो अवस्था पनि भोगेको छु । यो अवस्था मैले विश्वका अन्यत्र कुनै पनि भू–भागमा देखेको छैन । एलईडी ल्याउँदा जुन गति मैले पाएको छु, त्यो विश्वका अन्य भागमा पाएको छैन । त्यो अपवाद हो ।
अन्ततः हामीले यो अत्यन्त सकारात्मक भएको पायौं । हामी दिगो र टिकाउ हुने खालको कम्पनी हौं । हामी क्षणिक भरको कम्पनी होइनौं । यो हाम्रा लागि विलकुल सकारात्मक हो । अर्को जीएसटी हो । सुरुमा यो अत्यन्त अवरोधात्मक किसिमको देखा पर्यो । तर, मध्यकालीन अवधिमा हाम्रो टिमका लागि यो अत्यन्त सकारात्मक भयो । कुनै समयमा अत्यन्त जटिल देखा परेको यो सरल भएको छ । भारत सरकारले केही वर्ष अगाडि कालो धनको पर्दाफास गर्नका लागि भनेर अमौद्रीकरणको नीति ल्यायो । त्यो हाम्रा लागि पनि समस्याग्रस्त देखा पर्यो । अमौद्रीकरणले व्यवसायलाई साढे दुई त्रैमाससम्म सीमित गरायो । व्यवसाय ओरालो लाग्यो ।
जीएसटीले तपाईंको बिक्रीलाई कसरी अवरोध पुरायो ?
हामी प्रत्यक्ष रूपमा अन्तिम उपभोक्ताका लागि बिक्री गर्दैनौं । हामीसँग ८०० भन्दा बढी वितरक छन् । हामीसँग झन्डै १० लाख खुद्रा बिक्री केन्द्रहरू रहेका छन् । जीएसटीको कारोबारले प्रत्येक बिन्दुमा असर पारेको थियो । वितरकले बिलिङलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुपरेको थियो । यदि तपाईंले सप्लाई चेन हेर्नुभयो भने उनीहरूको आवश्यकताको पूरै प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएसटीबाट देखा परेको अवरोधले पूरै भ्यालू चेनले तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो । फिलिप्सलाई एउटा कम्पनीका रूपमा यो ठूलो कारोबारको रूपमा देखा परेन । यो हाम्रा वितरकका लागि समस्याको रूपमा देखा पर्यो ।
विश्वव्यापीकरण विरोधी, संरक्षणवादी कदम र ब्रेक्जिट जस्ता अवस्थालाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
यदि ब्रेक्जिट जस्तो घटनालाई लिनु हुन्छ भने यसको नतिजा के हुन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसले अस्थायी रूपमा सिर्जना गर्ने अनिश्चिततालाई हेर्ने हो भने यो अत्यन्त नकारात्मक हुनेछ । यो व्यवसायका लागि अत्यन्त नकारात्मक, मानिस र कामदारको स्थायित्वका लागि पनि अत्यन्त नकारात्मक हुनेछ । यसको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पनि अनुमान लगाउन सकिन्न । सबै किसिमका अनिश्चितताहरूका लागि छलफल र केही विश्वव्यापी सम्झौतामा निर्भर रहन्छ । यो व्यवसायका लागि सकारात्मक हुनेछैन ।
अर्कातिर तपाईंसँग वितरणको नयाँ तरिका छ । हाम्रो काम भनेको यसको परिणाम के हो र यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बुझ्नु हो । उदाहरणका लागि बेलायतमा पाउन्डको अवमूल्यन भएको छ । यसलाई बजारमा पठाउनु उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो बजारमा सफलतापूर्वक पुनः स्वीकार गर्नुपर्छ । यदि अमेरिकालाई हेर्ने हो भने हामी प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेका छौं । हामीले यसको असर १ करोड ९० लाख डलर पुग्ने मूल्यांकन गरेका छौं । हामी यसको सामना गर्न गइरहेका छौं ।
त्यसैले के विश्व व्यवसाय गर्नका लागि कठिन थलोका रूपमा विकास भइरहेको छ ? विगतका केही वर्षहरूमा व्यवसाय गर्नका लागि विश्व कठिन थलोका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ । जब यो कठिन हुनेछ, यसको अर्थ तपाईंलाई अन्यको तुलनामा राम्रो गर्ने अवसर मिलेको छ । यसले हामी सञ्चालनमा रहेको बजारको पृथक् बजारको अवस्थाको सामना गर्नका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीतिक मापनतर्फ डोराएको छ ।
भारतका लागि तपाईंका विशेष योजनाहरू के छन् ?
हाम्रो बजारमध्येमा भारत पाँचौं उत्कृष्ट बजार हो । आगामी दशकमा भारत विश्वकै तीव्र वृद्धिको अर्थतन्त्र हुन गइरहेको मलाई लागेको छ । म भारतसँग १५ वर्षदेखि आबद्ध रहँदै आएको छु । यो त्यस्तो मुलुक हो जसलाई म अत्यन्त गौरवका साथ विश्वास गर्छु । यदि भारत तीव्र वृद्धिको मुलुक भयो भने सकारात्मक आर्थिक विकासका कारण हामीले विश्वास गर्नुपर्छ । किनभने हामी अग्रणी रूपमा छौं ।
भावी दिनमा कम्पनीका लागि भारत तेस्रो ठूलो बजार भएको मुलुक हुने मलाई लागेको छ । हाम्रा योजनाहरू व्यावसायिक, आर एन्ड डी र औद्योगिक हुन् । हामीसँग भारतमा औद्योगिक आधारहरू छन् । यीमध्ये धेरैजसोले भारतमा सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छन् । यी उत्पादनहरू आंशिक रूपमा विश्वका लागि पनि हो । आगामी दिनहरूमा भारत म्यानुफ्याक्चरिङका लागि अर्थपूर्ण थलोका रूपमा विकास भइरहेको छ । यो ठूलो बजारका कारण मात्रै नभएर मानिसको क्षमताका आधारमा पनि अहो । याहाँको पूर्वाधार र पर्यावरण म्यानुफ्याक्चरिङका लागि सुधार भइरहेका छन् ।
भारतमा हामीले हाम्रा नयाँ उत्पादनहरू जस्तै वाइफाइको परीक्षण, विकास र बिक्री गरिरहेका छौं । यसले वाइफाइलाई विस्थापित गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यो प्रविधिमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरंगको माध्यमबाट इन्टरनेट प्राप्त गर्नुको साटो प्रकाशबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामीले ठूलो परियोजना हात पारेका छौं र धेरै उपभोक्ताले पनि यसमा चासो देखाएका छन् ।
यो वाइफाइभन्दा धेरै स्थिर भएकाले यो यसको राम्रो पक्ष हो । यो तीव्र गतिको छ । यदि तपाईं घरको भित्र हुुनु हुन्न भने तपाईंले यो पाउन सक्नुहुनेछैन । यो विशेषताले नै धेरै उपभोक्तालाई आकर्षित गरेको छ । हामी यो प्रविधिमा अत्यन्त विश्वास गर्छौं । हामीले भारतमा यो प्रविधि प्रयोग गर्ने पहिलो योजना सम्पन्न पनि गरिसकेका र्छौ । त्यहाँ प्रशस्त उपभोक्ताहरूको रुचि देखिएको छ । सबै पेटेन्ट हाम्रो नाममा छ र हाम्रो प्रविधि ‘ए’देखि ‘जेड’ सम्म रहेका छन् ।
चालकविहीन कार लाइट पोलबाट सञ्चालन हुनेछन् । प्रविधि उपलब्ध छ । हामीले भारतमा आर्किटेक्चर लाइटिङका बारेमा सोचिरहेका छौं । हामीले इन्डिया गेट, रेडप फोर्ट र राष्ट्रपति भवनको केन्द्रीय सचिवालयको उत्तर र दक्षिण गेटमा पनि यो काम सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
तपाईंको विश्वव्यापी सञ्चालनमा बैंग्लोरको के भूमिका छ ?
बैंगलोरमा हामीले इकोसिस्टमको क्षमता प्रयोग गरिरहेका छौं । यो सफ्टवेयर, एप्स, विकासका बारेमा हो । हामीले हाम्रो केन्द्रीय सञ्चालन केन्द्रलाई बैंग्लोरमा सारिसकेका छौं । सडक बत्ती सफ्टवेयर पनि योजनामा रहेको छ । यो सामान्यतया प्रत्येक तीन साताको अवधिमा अद्यावधि गरिनेछ ।